Raysulwasaare ku xigeenka dalka Turkiga Veysi Kaynak oo yimid Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaRaysulwasaare ku xigeenka dalka Turkiga Veysi Kaynak oo yimid Muqdisho
April 2, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Raysulwasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo soo dhaweynaya
Raysulwasaare ku xigeenka dalka Turkiga Veysi Kaynak. [Xigashada Sawirka: Radio Muqdisho]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaare ku xigeenka dalka Turkiga Veysi Kaynak ayaa maanta oo Axad ah yimid caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Raysulwasaare ku xigeenka ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Muqdisho ku qaabilay dhiggiisa Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo masuuliyiin kale oo katirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
Labada Raysulwasaare ku xigeen ayaa wadajir u booqday xarunta Bisha Cas ee Turkigu ku leedahay Muqdisho, halkaas oo maamulka gobolka Banaadir uu ku wareejiyey gaadiid iyo agab kale oo loogu talogalay in kor loogu qaado bilicda caasimadda Muqdisho.
Mudane Veysi Keynak ayaa sidoo kale kulan la qaatay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Raysulwasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre, waxana ay ka wadahadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo taageerada ay mar walba la garabtaaganyihiin shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan xaalada abaaraha ka jira dalka iyo sidii ay gacan mugleh uga geysan lahaayeen.
January 29, 2017 Xarumaha ganacsiga magaalada Garoowe oo maanta xiran
At least four wounded in truck accident in Karkar region
Xulka kubada cagta dalka Portugal ayaa markoodii ugu horeysay ku guulaystay koobka qaramada qaarada Yurub ee sanadka 2016-ka. Gool uu dhaliyay Eder intii lagu guda jiray soddonka daqiiqo oo dheeriga ah ayaa Portugal u ogolaaday [...]